3 buugaag naqshadeynta garaafka ku habboon xagaagan | Abuurista khadka tooska ah
3 buugaagta naqshadeynta garaafka ku habboon xagaaga
Qaar badan oo naga mid ahi waxay sugaan xagaaga ilaa Lear, iyadoo laga faa'iideysanayo xaqiiqda ah inaan ku raaxeysano waqti badan oo firaaqo ah. Waxaan taageersanahay in aanan lumin dhaqamada noocan oo kale ah mana iloobin caada u aqriska buugaagta wanaagsan ee qaabka warqada ah waana ogahay in inbadan oo idinka mid ah ay sidoo kale sameeyaan. Dhammaan kuwa aniga oo kale ah waxay rabaan inay bilaabaan shaqo wanaagsan oo ku saabsan naqshadeynta garaafka, maanta waxaan dib u eegeynaa saddex ka mid ah cinwaannada ugu xiisaha badan ee dhici kara xagaagan.
Waxaan isku dayey inaan ururiyo buugaag dheef-shiidi kara oo la akhrin karo dhib la'aan. Laba ka mid ahi waxay diiradda saaraan dhinacyada habraaca, halka midkoodna diiradda saarayo falanqaynta taariikheed ee shakhsiyaadka xirfaddeenna. Iyaga ku raaxee!
1 Buug-gacmeedka naqshadeynta garaafka
2 Aragti naqshadeeyayaasha qaabdhismeedka
3 Tababbarka Naqshadeynta Sawirka: Habka Hal-abuurka ah
Buug-gacmeedka naqshadeynta garaafka
Buuggan ayaa ku habboon ciidahan maxaa yeelay, ka sakow in la dheefshiidi karo, waa dhakhso, toos ah oo bixisa qalab aad u tiro badan si looga faa'iideysto fikradaheenna. Waxaa loogu talagalay in loogu adeego akhristaha (oo noqon doona celcelis ahaan naqshadeeye / arday) kaalmo ahaan dhiirrigelin, milicsi iyo barasho. Waxay u taagan tahay soo bandhigida muuqaal gebi ahaanba dhiirigelin leh. Waxaa lagu dhex daadiyaa in ka badan 1000 sawir oo leh waxyaabo naqshadaysan oo kala duwan, daaweyn qaabab kala duwan iyo xalalka goobta. Qaab dhismeedkiisa iyo qaabkiisa ayaa u oggolaanaya inuu noqdo buug tixraac deg deg ah. Jaleeco keliya ayaan ku awoodi doonnaa inaan ka jawaabno shakiga jira. Tirada badan ee talobixinta ee ay bixiso waxay ka dhigeysaa qalab si wax ku ool ah waxtar ugu leh wax ka qabashada mashaariicda fudud iyo mashaariicda adag.
Aragti naqshadeeyayaasha qaabdhismeedka
Fikradda aragtida fog ayaa si adag loola xiriiriyay dadka kale sida hal-abuurka, male-awaalka ama xitaa sixirka. Waana in qof aragti leh uu isu muujiyo inuu yahay shaqsigaas awooda inuu arko wax ka baxsan waxa dadka kale awoodaan. Ka helida nuances aan dhammaad lahayn nooc ka mid ah «aragti qarsoon»Inta dhiman. Markuu aragtidiyuhu maareeyo inuu doorkiisa ciyaaro oo uu si wax ku ool ah u horumariyo waxqabadkiisa, wuxuu ku dhammaadaa inuu noqdo kanaal isku xira xilligan iyo mustaqbalka fog, oo keenaya kacdoonno aan horay loo arag. Dhamaanteen waxaan leenahay aragtiyayaal caan ah: Shakhsiyaad taariikhi ah oo hal mar fikirka adduunka ka dhigay xuubsiibasho iyo xadka oo maanta, xitaa waqtiyadii hore, sii wadaya inay u adeegaan tusaalooyin ahaan, ereyo iyo ficillo aan la sheegi karin iyo xoog ku filan oo naga dhigaya inaan gariirno oo aan dareemo dhiirigelin weyn iyo rabitaankeena si aan u horumarino nafteena. Buugani wuxuu diiradda saarayaa noocyada jilayaasha ah ee ku jira taariikhda gaaban ee naqshadeynta garaafka, in kasta oo dabcan ay ku sugan yihiin laan ama goob kasta. Shaqadani waxaa ka mid ah daraasadaha ku saabsan qorayaasha inay yihiin kuwo go'aan ka gaaraya aragtideena Piet Zwart oo ay saameyn ku yeelatay qaab dhismeedka, kaasoo ku qeexay hannaankiisa naqshadeynta "dhismaha bogagga leh astaamaha"; Ladislav Sutnar oo ka hadlaya “Ujeedada naqshadeynta muuqaalka wanaagsan waa mid culus. Si loo gaaro horumar iyo horumar, naqshadeeye waa inuu u shaqeeyaa xadka awoodiisa; waa inaad marka hore fikirtaa oo aad hadhow shaqeysaa ”.
Tababbarka Naqshadeynta Sawirka: Habka Hal-abuurka ah
Naqshadaynta wanaagsani waxay leedahay ujeedooyin kala duwan (wax walba waxay ku xirnaan doonaan gacmaha dunida soo galiya, iyo maskaxda abuurtay), laakiin mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan uguna fogeeya fanka in badan, waa waxtarka. Adduunyada dhexdeeda waxaa ku sugan halyeeyo aan la dhaafi karin, oo aan wada ognahay: hal-abuur. Waxaa jira dhinacyo kala duwan oo ku saabsan dhacdadan aadanaha. Mid ka mid ah ayaa u daawanaya inuu yahay shil ku dhowaad, ciil sixir ah. Mid kale oo iyaga ka mid ah ayaa laga yaabaa inuu ka yara sir yaraado oo caqli badan yahay: Waana inay difaacdo in hal-abuurnimadu ay ku jirto markasta tusaalooyin shisheeye oo aan mar walba ku dayan karno iyada oo loo marayo habka ku-dayashada. Gabagabada had iyo jeer la gaaro waxay ku jirtaa habka: Maxaa loogu talagalay? Waa wax aad u xiiso badan xaqiiqda ah in dhammaan kuwa ku dhaqma hal-abuurka qaab nololeed ay dhif u joojiyaan inay u falanqeeyaan inay tahay dhacdo. Xaaladaha, tababarka lagama maarmaanka ah ama macnaha guud ahaan lama tixgelinayo. Shaqadani waxay ka muuqataa si xiiso leh oo aad u xiiso badan, dood ka timaadda qaab dhismeedka habraaca iyo iyada oo aan lahayn aragti waxqabad leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » 3 buugaagta naqshadeynta garaafka ku habboon xagaaga
U adeegso Photoshop sida pro run ah 10 tallaabo